बालुवाटार जग्गा प्रकरण : गोयल ग्रुपको निर्माण कम्पनीका नाममा मात्र १९ कित्ता!
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : गोयल ग्रुपको निर्माण कम्पनीका नाममा मात्र १९ कित्ता! गायब पार्ने कम्पनी र व्यक्तिको संख्या ८३
लिलु डुम्रे सोमबार, वैशाख १६, २०७६, १९:४३
काठमाडौं- भू-माफियाको चलखेलमा बालुवाटारका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन राजनीतिक पहुँचसँगै व्यापारिक घरानाको समेत मिलमतो भएको देखिएको छ। उक्त जग्गाको माफियाको रूपमा रहेका शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीसँगै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम सार्वजनिक भएपनि अन्यको नाम भने गोप्य नै रहेको थियो।
यसरी गोप्य र हराएको दाबी गरिएको विवरण नेपाल लाइभले फेला पारेको छ। नेपाल लाइभले फेला पारेको विवरण अनुसार भाटभटेनी, गोयल ग्रुपको निर्माण कम्पनी डिएलएफ डेभलपर्स (भारतीय निर्माण कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा स्थापना भएको) सहित अन्य कम्पनी र व्यक्ति गरी ८३ जनाका नाममा बालुवाटारको जग्गाको स्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ।
उनीहरुले सो विवरण सार्वजनिक नगर्न मालपोत कार्यालयबाटै विवरण गायब पारेका थिए। तर, विवरण गायब भएकोमा दबाब बढ्दै गएपछि यसको खोजीसमेत सुरु भएको थियो।
नेपाल लाइभले फेला पारेको विवरणमा गोयल ग्रुपको निर्माण कम्पनी डिएलएफ डेभलपर्सको नाममा १९ कित्ता जग्गा रहेको देखिन्छ।
नेपालको ख्यातिप्राप्त औद्योगिक घराना गोयल ग्रुपले बैंकदेखि निर्माण कम्पनीसम्मका कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको छ।
उसको स्वामित्वका रहेको डिएलएफ डेभलपर्सको नाममा बालुवाटारका १९ वटा कित्ता रहेको नेपाल लाइभले फेला पारेको हो।
बालुवाटारका ४ सय ५० कित्ता जग्गा रोक्का गरिएसँगै यी जग्गा पनि मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्ने क्रममा भू-माफिया र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा गायब गरिएको फाइलमध्ये अधिंकाश कित्ताको पहिचान गर्दा सो कम्पनीको नाममा ती जग्गा रहेको रहस्य खुलेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गायब पारेका १०२४ र १०२५ नम्बरका फाइलबाट व्यक्तिहरू र संस्थाहरूका ३२७ कित्ता जग्गा पहिल्याउँदा यो कम्पनीले आफ्नो नाममा जग्गा राखेको देखिएको छ। ती जग्गा व्यक्तिको नाममा नभई कम्पनीको नाममा भएकाले थप खोजी गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले अन्य व्यक्तिका नाममा नामासारी वा बिक्री हुन नदिन किनबेचमा रोक लगाएको बताएको छ। मन्त्री पद्मा अर्यालले गठन गरेको सार्वजनिक जग्गा खोजबिन समितिले ७ दिन लगाएर गायब पारिएका फाइलबाट कित्ता छुट्याएर खोजी गरेको छ।
खोजबिनबाट पत्ता लागेको सरकारी जग्गामध्ये अधिकांश भू-माफिया रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र उनीहरुका पत्नीको नाममा छ। सुवेदी र ढकालपछि बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा धर्मशोभा शाक्यको नाममा रहेको देखिन्छ। शाक्यका नाममा २१ कित्ता जग्गा रहेको छ। उनी भू-माफिया ढकाल र सुवेदीपछिको जग्गा धेरै हुने व्यक्ति रहेको देखिन्छ।
रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालका नाममा ९ कित्ता रहेको छ। सुवेदी र ढकालका पत्नीका साथ एक गुरुङ थरकी महिलाको नाममा तीन कित्ता छ। ढकाल र सुवेदीका पत्नीहरुका नाममा मात्रै थप ३ कित्ता समेत छ। ढकाल र सुवेदीको परिवार तथा एकल नाममा गरी कुल ३७ कित्ता जग्गा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै मीन गुरुङका नाममा कित्ता नम्बर ७४, ४१३ र १३७ गरी तीन कित्ता जग्गा रहेको देखिन्छ।
भू-माफियाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा पास गरिदिएको जग्गाको कित्ता नम्बर ३१५ र ३०९ रहेको छ।
पौडेलका नाममा रहेको जग्गा पनि मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ। व्यवसायी गुरुङ र भू-माफिया सुवेदी र ढकालको नाममा अर्को एक कित्ता संयुक्त रहेको देखिन्छ। कित्ता नम्बर ८३ तीन जनाको नाममा रहेको मन्त्रालयले खोजी गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले रोक्का राखेको जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा समेत ५ कित्ता रहेको फेला परेको छ। संघको नाममा ७४८, ४५२, ७४६, ७५० र ७४४ कित्ताका जग्गा छन्।
‘भू-माफिया’ ढकाल दम्पतीका नाममा ११ कित्ता छुट्टै रहेको समेत देखिएको छ। गुरुङका नाममा बाहेक भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनीका नाममा अलग्गै १० कित्ता जग्गा रहेको छ। ढकालले आफ्ना नाममा एकल रुपमा ३ कित्ता राखेका छन्। उनको नाममा ४०, १२ र ३७ नम्बरका कित्ता जग्गा छन्।
मोही कायम गर्न गुठी बनाएका पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा रहेका १० कित्ता जग्गा ढकाल र सुवेदीले आफ्नै नाममा सारेका छन्।
भू-माफियाले प्रधानमन्त्री कार्यालय सरकारको नाममा रहेका जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएका थिए। नेपाल सरकारको नाममा रहेको २९ कित्ता रहेको फाइल गायब पारिएको थियो। साथै, प्रधानमन्त्री निवासको लागि छुट्याइएको २५ कित्तामा रहेको जग्गा मन्त्रालयले पहिल्याएको छ।
सरकारी भवनका लागि कायम ११ वटा कित्ता जग्गा पत्ता लागेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ।
यसैगरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नाममा रहेको ३६३ कित्ता कायम रहेको जग्गाको फाइल पनि गायब बनाइएको थियो। नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ७ कित्ता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री अर्यालले भू-माफियाको आडमा डिल्लीबजारबाट मालपोत कार्यालयले गायब पारेका दुई फाइलका अधिकांश कित्ता पहिचान भएको बताइन्।
आफ्नै सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कांग्रेसले ब्युँताउने
कालापानी जोड्ने सडकलाई सरकारले बजेटमा महत्त्व दिएन